युगसम्बाद साप्ताहिक - जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन
Wednesday, 02.15.2017, 12:49pm (GMT+5.5)
‘प्रजातन्त्र’ भन्नाले जनइच्छाको सम्मान हुने र व्यक्तिका अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था भनेर बुझिन्छ । यस मानेमा सार्थक काम भए मात्र जनताले विश्वास गर्छन् । बहुमतको शासन भन्दैमा पनि हुँदैन, काम पनि जनताका पक्षमा हुनुपर्छ । आज यहाँ प्रजातन्त्रकै मूल्य–मान्यताको उपेक्षा र जनताको मनोबल कमजोर पार्ने काम भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । तर खोई उपलब्धि ? मनपरी बोल्ने, मनलागी गर्ने र भ्रष्ट आचरण गर्ने बाहेक अरु के उपलब्धि छन् यहाँ ? हो, उहाँ दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनु निश्चिय नै उहाँको उपलब्धि हो, तर विचार गर्नोस् त– आज यहाँ महंगी, बेरोजगारी, कालाबजारी, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण–फिरौती, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भागवण्डा, हत्या, हिंसा र असुरक्षा सामान्य भएका छन् । के यिनै होइनन् उपलब्धि ? अपराध कर्मलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो ?
कतिपय कुरामा केही नेताहरुपति भारतका नेताको कृपादृष्टि होला, तर त्यत्तिकैले यहाँको राज्यव्यवस्था पनि भारतकै नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता त छैन होला नि ? यहाँ जे गर्नुछ आफ्नै देशबासीको विश्वास जितेर गरे हुँदैन ? कि बाहिरकै इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता छ ? होइन भने संघीयताकै नक्कल किन गर्नुपरेको हो ? नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ भन्छन्, तर यहाँ त अक्कलबिनाको नक्कल भयो । नेपालले बुझ्नुपर्ने के थियो भने– आआफ्नै स्वतन्त्र ढंगबाट मुक्त हुँदाका बखत नै भारतका अनेक प्रान्त, प्रदेश र रियासत यस्ता थिए जसको शासन प्रबन्ध आआफ्नै स्वतन्त्र ढंगबाट चल्दैआएको हुनाले ती सबैलाई केन्द्रले समाल्न थाह्रो थियो । त्यस्ता कतिपय राज्य–रजौटाका प्रान्त केन्द्रबाट अलग्गै रहन चाहन्थे । हैदरावाद, काश्मीर जस्ताा राज्य समाल्न सजिलो थिएन । काश्मीर त आज पनि टाउकोदुखाई छँदैछ । प्रान्त टुक्रिने क्रमले भारतलाई आज पनि संघ विभाजन घाँडो भएको छ । केन्द्रबाट छुट्टिनसक्ने राज्यलाई केन्द्रसित आबद्ध पार्न भारतले संघीय व्यवस्था अंगीकार गरेको थियो भने यहाँ देशका कतिपय भाग केन्द्रबाट टुक्र्याएर, छुट्याएर अलग पार्न संघराज्य लादिंदैछ । यहाँ बाहिरिया छेद र नेताका स्वार्थले गर्दा देशलाई कमजोर पार्ने काम गरिंदैछ । हुँदाहुँदा स्वायत्तता मात्रै होइन, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भन्नका पछाडि ठूलै षड्यन्त्र रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
मूल कुरा– राजनीति गर्नेहरुले राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई सर्वोपरि राख्नुपर्नेमा यहाँ दलगत मात्रै नभएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइनाले देशको एकता नै छिन्नभिन्न पार्ने स्थिति आउँदैछ । भारतले केन्द्रलाई बलियो पार्न खोजेको थियो भने यहाँ केन्द्रलाई कमजोर पार्न खोजियो । भारतले ५२६ राज्यलाई संघराज्यमा गाभेर केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाएको र नेपाल, सिक्किम, भुटानलाई समेत ताकेर । आखिर सिक्किमलाई त गाभिहाल्यो भने भुटान पनि उसैको ढडियामा परेको छ । अब बाँकी रहेको नेपाललाई पनि कमजोर पारेर निल्ने उपक्रम बुझ्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो सानो भूभाग र थोरै जनसंख्या भएको देशलाई संघराज्यहरुमा विभाजन गर्नु नै देश टुक्र्याउने उपक्रम भएको छ । त्यसैले प्रजातन्त्र नेताको मात्रै होइन, जनताको पनि हो भने जनताका कुरा पनि नसुन्ने बानी बसाल्नु प¥यो र राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा जनताको उपेक्षा गरिरहने हो भने जनताले सधैं सहेर बस्ने छैनन् र अझै पनि जनताका कुरा सुनिंदैनन् भने जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ र त्यसकको अपजसको भागी नेताहरु नै हुनुपर्ने छ ।
अहिले राज्य पुनःसंरचना प्रतिवेदन चर्चामा छ । सो अनुसार गाविस, नगरपालिकाहरु गाभिंदा ठूलो लगानीबाट तयार पारिएका पूर्वाधार खेरजाने, नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर निर्माण गर्दा थप आर्थिक भार हुने र केही विकासकै प्रवाह रोकिने हुन्छ । अबको विभाजनले भीर–जंगल–खोलानाला र बाटोको असुविधाले दूरी बढेर जनतालाई सुविधाको सट्टा असुविधा मात्रै बढाउँछ । भोलि बाटोघाटो, चरिचराउ, वनजंगल, सिंचाई, खानेपानी, खोलानाला र तालतलैयाको समेत उपभोगमा समस्या आउने र जटिलता थपिने स्थिति स्पष्ट छ । अर्को कुरा पचहत्तरै जिल्लाका जनता जिविस, गाविस, नपाहरुका काम–व्यवहारसंग अभ्यस्त भैसकेका हुनाले अब नयाँ ठाउँमा गएर काम लिन पनि त्यति सहज हुनेछैन । पुराना संरचना फालेर नयाँमा जानु भनेको अनाडी छोराले बाबुले बनाएको पक्की घर भत्काएर अर्घेलो खर्च गर्नु जस्तै हुनेछ । क्षति त आफ्नै हुने हो नि । त्यसैले यस्ता अनपेक्षित काम कुरा सच्याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । किन भने–
संघीयताको वास्तविक उद्देश्य स्वायत्त शासन हो भने त्यसकको व्यवहारिक पक्ष अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । यस अर्थमा साविकका ७५ जिल्ला विकास समिति, १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र, ३९१२ गाउँ विकास समिति र ५६ नगरपालिकाहरुले स्वायत्त शासनका रुपमा काम गरेकै थिए । त्यतिका स्थानीय निकाय हुँदाहुँदै तिनैलाई नपुग सम्झिएको अधिकार थपिदिने हो भने आजको जस्तो अन्योलको स्थिति नै रहने थिएन । न आफूले बुद्धि पु¥याउने न त अर्काले गरेकको राम्रो कामलाई स्वीकार गर्ने भएपछि भाँडभैलो त हुने नै भयो नि । यो सबै संकुचित राजनीतिक स्वार्थ र बाहिरियाको भेदनीतिको दुष्परिणाम हो भनेर बुझेर काम गर्न जान्नुप¥यो ।
सरकारमा हुनेहरुले पाइलैपिच्छे आफ्ना गल्ती, कमजोरी ढाकछोप गर्ने र दोष अरुतिरै पन्छाउने, आफ्नो प्रशंसा मात्रै खोज्ने, चाटुकारहरुले भनेको पत्याउने, आफ्ना गल्ती नसच्याउने, आलोचना सुन्नै नसक्ने हो भने जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ रहन्छ ? त्यसकारण जनताले बेहोरेका यथार्थ कुरा सुनेर काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बाटो बिराई बिराई आफू सही छु भन्ने भ्रमम नपालियोस् । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपेक्षा नगरियोस् । जनतालाई सधैं भ्रममाा राख्ने दुष्पयास कसैले नगरोस् । दिन सधैं एकनास हुँदैनन् । जनता सधैं दर्शक मात्र भएर बस्दैनन् । असन्तोषको आगो सल्कने कारकतत्वलाई बुझेर बेलैमा निराकरण गर्नोस् प्रधानमन्त्रीजी ।
भनिन्छ– दश हजार उपदेशभन्दा एउटै मात्र राम्रो काम भयो भने त्यो ठूलो मानिन्छ । तर यहाँ भने सांसद, मन्त्री या नेता भएपछि आफूलाई सर्वज्ञ ठान्दारहेछन् कि कुन्नि ? काम गरेर देखाउनुसट्टा उपदेश मात्रै सुनाइरहेका हुन्छन् । अखबार पढ्नोस्, समाचार सुन्नोस् या भाषणै सुन्नोस्– उपदेश सिवाय केही हुँदैन, त्यो पनि रंग न ढंगको । उपदेशले मात्रै हुने भए कथाबाचक बोलाएर सुने भैहाल्यो नि । त्यसकारण नेताजी र मन्त्रीजीहरु ! तपाईंहरु जे भन्नुहुन्छ त्यो गरेर देखाउनोस्, भनेका कुरा आफ्ना आचरणमा उतार्नोस् । जनताका पक्षमा काम गर्न आएकाले सकेसम्म निष्काम कर्म गर्नसके त हुन्थ्यो । तर, तपाईंहरुबाट जनताले त्यस्तो आशा गरेका छैनन् । तैपनि तपाईंहरुले लिने ज्याला (सुविधा भन्नुपर्ने हो क्यारे) बराबरको काम त गरेर देखाउनोस् । हालै पनि राज्य पुनःसंरचना भनेर स्थापना गर्न खोजिएका केन्द्रले जनतालाई थप कठिनाईमा पार्ने काम हुन नदिनोस् । त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने उपदेश (भाषण) छाँट्ने काम कृपया नगर्नोस् ।